banyere anyị - Tanzania Crusher
Anyị na-eche echiche nke ọrụ "na-eme ka ndị ahịa baa uru karịa," na-emeso ndị ahịa anyị obi anyị nile, ma na-agbaso iwu na-agba ya. Ndị ahịa anyị na-ekesa karịa mba 120 na Asia, Europe, Middle East, Oceania na America. Anyị na-etinye ihe ọmụma ọkachamara anyị na ọrụ zuru ezu zuru ụwa ọnụ iji hụ na ọ ga - arụ ọrụ kacha mma maka azụmahịa onye ahịa anyị ...
Ịhọrọ nkedo ahụ dị mma na-amalite site na ịhọrọ nkata mmepụta ihe ziri ezi. Shanghai Xuanshi Machinery Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị na-emepụta igwe nkedi nke kachasị nsị na China. Guzosie ike na 2002, anyị nwere ahụmahụ dị ukwuu n'inyere ndị ahịa aka ịhọrọ ngwá ọrụ kpochapụrụ ezi maka ngwa ọ bụla. Na-elekwasị anya n'ịnye ihe ngwọta pụrụ iche, nke bara uru maka nkwụsịlata nha ọ bụla ọ bụla, anyị enyela ndị na-agbagharị nkume, ndị na-akụ sand na-egweri ọtụtụ ndị ahịa n'ụwa nile. Site na njirimara na ọrụ zuru oke anyị, Xuanshi enyewo ya maka ISO9001: 2008 Asambodo, Nkwepụta Global Production Asambodo na asambodo CE. Ụlọ ọrụ anyị dị na Shanghai, ebe anyị nwere ike ịnweta oké osimiri, ala, na njem ụgbọelu. Nke a na - eme ka ndị na - erepịa ihe na - ebugharị na - eme njem ma na - ebelata ụgwọ ahịa maka ndị ahịa anyị.
Iji mezuo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa anyị, anyị na-emepụta ihe niile dị iche iche nke nkume, mpempe nri, ihe ndị e ji ájá, ájá na ájá, na ngwá ọrụ nchịkwa. Ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị a kachasị ewu ewu na-agụnye ndị na-eti anụ ọhịa, ndị na-eti nri, ndị na-ekpo ọkụ na cone, ndị na-ehicha ájá, ndị na-egweri ihe igwe, ndị na-arụ ọrụ magnet, ígwè ọrụ mmiri, na ndị ọzọ. A na-emepụta ngwaahịa ndị a iji nye akwa arụmọrụ, ogologo ndụ ọrụ na obere ụgwọ ọrụ. Ugbu a, a na-ejikarị ngwaahịa anyị eme ihe na ntinye akwụkwọ na ihe owuwu ụlọ ọrụ dị iche iche, dịka ngwuputa osisi, osisi ciment, nchịkọta nchịkọta, nhazi ọgwụ, nhazi, ọrụ ụgbọ elu, na ọtụtụ ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, anyị na-enyekwa ngwọta maka nhazi oru ngo, dịka igwu igwe, eriri nkume, mmepụta mmepụta mmepụta na eriri mmiri.